Axmed Madoobe oo heshiis hordhac ah la gaaray Cabdinaasir Seeraar – Geelle Mag
Axmed Madoobe oo heshiis hordhac ah la gaaray Cabdinaasir Seeraar
Ali Ahmed Posted On November 29, 2019
Wararka aynu ka heleyno Magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay kulan xasaasi ah ku yeesheen Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Cabdinaasir Seeraar Maax oo ka mid ah Xubnaha Mucaaradsan Axmed Madoobe, kana soo horjeeda dib u doorashadiisii.
Wararka horudhaca ah oo kulankaas laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in xal laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Seeraar ee ka dhashay doorashadii ka dhacday Magaalada Kismaayo, iyada oo dhex-dhexaadinta labada mas’uul ay garwadeen ka ahaayeen Mas’uuliyiin ka tirsan dalka Kenya.
Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan Golaha Shacabka oo labaduba kasoo horjeeda Axmed Madoobe, ayaa mid kasta taageerayaashiisa Magaalada Kismaayo waxa ay u doorteen Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, hayeeshee Cabdinaasir Seerar uu si lama filaan ah ku tegay Magaalada Nairobi kulana kulmay Axmed Madoobe, halka Cabdirashiid Xidig aan weli wax war ah dhankiisa kasoo bixin.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa kadib doorashadiisii sheegay in uu diyaar u yahay in uu xaliyo cidkasta oo wax ka tabaneysa, waxaana maalmahaan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu kulamo kula qaadanayey siyaasiyiin iyo madax ka tirsan Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo diiday dib u doorashadiisii ayaa weli uu u dhaxeeyaa khilaafkii ka dhashay doorashada, taas oo aan weli xal laga gaarin.
Mas'uul beeniyay in Ciidamo Itoobiyaan ah la geeyay Magaalada Dhuusamareeb